အာရှဒေသ တင်းမာမှု နဲ့ မြန်မာ့ရပ်တည်ချက်။ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ? – Let Pan Daily
အာရှဒေသ တင်းမာမှု နဲ့ မြန်မာ့ရပ်တည်ချက်။ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ?
တောင်တရုတ် ပင်လယ်အရေးဟာ အတော်တင်းမာနေပါတယ်။ ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ ပစ်ကြခတ်ကြနဲ့အကန့်အသတ်စစ်ပွဲတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ တရုတ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေက ထိုင်ဝမ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျပန်၊ စတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်က တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကြီးတခုလုံးကိုသူပိုင်လုပ်လိုက်တယ်။ ဖေါ်ပြပါနိုင်ငံတွေရဲ့ရေပိုင်နက်တွေပါသူပိုင်တဲ့အထဲပါကုန်တယ်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာ တရုတ်ကရေတပ်စခန်းဆောက်ဖို့လုပ်တယ်။ ကျွန်းအတုဆောက်တယ်။ ဖေါ်ပြပါနိုင်ငံတွေနဲ့ ပိုင်နက်အငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ အမေရိကန် အပါအဝင်နိုင်ငံတကာ သင်္ဘောတွေသွားလာတဲ့ ရေကြောင်းလိုင်းလည်းရှိပါတယ်။ အခုကအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတချို့နဲ့ တရုတ်နဲ့အဓိကထိပ်တိုက်တွေ့နေပါတယ်။ ပြောရရင် တရုတ် နဲ့ တကမ္ဘာလုံးနီးပါးနဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့သလိုဖြစ်နေတယ်။ အခုက ဂျပန်၊ အမေရိကန်၊ ကအဓိကပူးတွဲပြီးတောင်တရုတ် ပင်လယ်ထဲကို စစ်င်္ဘောတွေနဲ့ဝင်လာပြီ၊ ရောက်နေပါပြီ။ အမေရိကန်က လေယဉ်တင်သင်္ဘောတွေပါပါတယ်။ အိန္ဒိယကလည်း စစ်င်္ဘောလွှတ်လိုက်ပြီ၊ တောင်ကိုရီးယားကအမေရိကန်၊ ဂျပန်ဘက်ကပါပြီးသား။
ဒေသခံ ထိုင်ဝမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ် တွေနဲ့ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ ပူးတွဲပါလာကုန်ပြီ၊ ဗြိတိန်ရေတပ်က လေယဉ်တင်သင်္ဘောထပ်လွှတ်မလွှတ်စဉ်းစားနေပါတယ်။ ဗြိတိသျှစစ်င်္ဘောတွေဟာ ၂၀၁၉ နှစ်ဆန်းပိုင်းကတည်းက အမေရိကန်နဲ့တွဲပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရောက်နေပြီးသားပါ။ နောက်ထပ်လဲ လွှတ်ထားပါတယ်။ ဟောင်ကောင်အရေးမှာ ဗြိတိန်က ထိပ်တိုက်တွေနေပြီးသား။ သြစတျေးလျားမှာ အမေရိကန်က လွန်ခဲ့တဲ့လေးငါးဆယ်နှစ်ကတည်းက အာရှအတွက် အခြေခံစစ်စခန်းဆောက်ပြီးသား။ အမေရိးကားက လွန်ခဲ့တဲ့လေးငါးနှစ်ကတည်းက သူရဲ့ကမ္ဘာအနှံဖြန့်ထားတဲ့ရေတပ်တဝက်ကို။ သြစီနဲ့ ပစ္စဖိတ်အခြေစိုက်ရေတပ်စခန်းတွေဘက်ကိုပို့ထားပြီးသား။ အမေရိကန်လေယဉ်တင်သင်္ဘော ၁၂ စီးရှိတဲ့အထဲက။ ၆ စီးကိုအာရှပို့ထားပြီးသား။ တခုခု ဖြစ်ရင် သြစီကလည်း အမေရိကန်ဘက်ကဘဲ။
အိန္ဒိယက တရုတ်နဲ့နယ်စပ်မှာ အပြန်အလှန်တိုက်ကြခိုက်ကြဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ စစ်သား ၂၀ သေထားတယ်။ စိတ်နာပြီး အိန္ဒိယရေတပ်သင်္ဘောတွေကို လွှတ်ထားတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ မြန်မာပြည်က ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ဘက်ကကျွန်းတွေမှာ တရုတ်ရေတပ်စခန်းကို သန်းရွှေလက်ထက်ကတည်းကခွင့်ပြုပြီးသား။ စစ်တွေ နဲ့ ကျောက်ဖြူဘက်မှာ တရုတ်ရေတပ်စခန်းတွေရှိနေပြီးသားပါ။ ကိုးကိုးကျွန်းမှာလည်းတရုတ်ရေတပ်ရေဒါနဲ့ထောက်လှမ်းရေးစခန်းရှိပြီးသားပါ။ တရုတ်တွေက အခုအခါရခိုင်ကိုပါအခြေကုတ်ယူဖို့လုပ်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ကိုတရုတ်ကစီးထားပြီ။
ဟိုတလောက ဗခမကမင်းအောင်လှိုင်ရုရှားမှာထုတ်ပြောတာဟာ တရုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင် စစ်အစိုးရသက်တမ်းတလျောက်အတင်းမာဆုံးထုတ်ပြောတာလို့ဆိုရမယ်၊ တရုတ်က မြန်မာလက်နှက်ကိုင် ၇ ဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။ နောက်ဗခမက မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယနဲ့တွေ့တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားက ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။ မြန်မာက တရုတ်လက်ထဲရောက်နေတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအရမြန်မာဟာ ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ။ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးမှာမြန်မာရဲ့အဓိကမဟာမိတ်က တရုတ်ဖြစ်နေတယ်။ စစ်ရေးအရရောဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ။ မြန်မာဟာတရုတ်ဘက်ရပ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ စဉ်စားလေ။ အခုက တကမ္ဘာလုံးနဲ့တရုတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့နေပြီ။ တရုတ်နဲ့က တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စတင်မဟုတ်ဘူး။ တရုတ်ရဲ့ ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းကို အခြေခံပြီး စစ်ရေး၊ စီးပွားရေးတည်ဆောက်မှု၊ နယ်ချဲ့မှုဟာ ဂျပန်၊ အမေရိကန်နဲ့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေကို ခြိမ်းခြောက်လာနေတယ်။ ဒါကို ဟန့်တားဖို့လိုလာတယ်။ အခုကလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာ တရုတ်ကအားလုံးသူနယ်မြေလုပ်တာကိုတော့ ဂျပန်၊ အမေရိကန်နဲ့ဒေသခံနိုင်ငံတွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ တရုတ်ကို နဲနဲတောာ့ နောက်ကိုပြန်တွန်းမှရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတယ်။
အဲဒိအတိုင်းအတာလောက်အထိတော့ ဝိုင်းတွန်းကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်။ နောက်စိတ်နာတဲ့အချက်တချက်ကတော့ ကိုဗစ် ကိစ္စဘဲ၊ ကိုဗစ်တရုတ်မှာစဖြစ်တဲ့အချိန်ဟာ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာကတည်းကစဖြစ်တာပါ။ ဒါကို တရုတ်က ဖြစ်ဖြစ်ချင်း အသိမပေးဘဲ ၃ ပတ်လောက်ဖုံးထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒိမှာ တရုတ်ကပြန်လာတဲ့ အထူးသဖြင့် တရုတ်တွေကနေတဆင့် အမေရိကန်နဲ့ အနောက်တိုင်း ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုပျံနှံကူးဆက်သွားပါတယ်။ အဓိက ကတော့ ၃ ပတ်လောက်ဖုံးကွယ်ထားတာ။ အမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားတဲ့လူလမ်းကြောင်းတွေကိုမပိတ်တာ။ ပိုးရဲ့မျိုးဗီဇကိုမပေးဘဲဖုံးထားတာ။ ဒါတွေအပေါ်မှာ အမေရိကန်နဲ့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေက စိတ်နာကြပါတယ်။ တမင်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်သလားလို့တောင်ထင်ကြတယ်။ အခုအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေဟာ စီးပွားပျက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်ဟာအဆိုးဆုံးစီးပွားပျက်သွားပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေဟာ တောင်ရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကိစ္စကိုပိုမိုတင်းမာသွားစေပါတယ်။
အခုကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စမှာ တရုတ် နဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့နေတဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဂျပန်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်၊ အိန္ဒိယ၊ ဗြိတိန်၊ သြစီ၊ ထိပ်တိုက်မပါသေးတာက ရုရှားဘဲကျန်ပါတယ်။ အဲဒိတော့မြန်မာကဘယ်လိုရပ်မှာလည်း။ လောလောဆယ်တော့မြန်မာပြည်ထဲက အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတော့ ကိုဗစ် နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိုဘဲ အာရုံရောက်နေကြပါတယ်။ စစ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ဘယ်လိုရပ်တည်ကြမလဲ။
source : ဇ်ာမိုးကျော်။
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကို သြဂုတ်လ (၁၀) ရက်နေ့ တွင် ရုရှား နိုင်ငံ မှတ်ပုံ တင်မည်
ဆန္ဒပြ သူများကြောင့် အမေရိကန် မှ သက်တော်ရှည် စာအုပ်ဆိုင်ကြီး မီးလောင် ပျက်စီး
COVID-19 ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ဟန့်တားပေးနိုင်တဲ့ ပဋိ ပစ္စည်းေ တွ့ရှိကြောင်း အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ ကြေညာ